यसकारण हुने भयो भोली नेपाल बन्द – List Khabar
Home / समाचार / यसकारण हुने भयो भोली नेपाल बन्द
यसकारण हुने भयो भोली नेपाल बन्द
admin November 15, 2021 समाचार Leaveacomment 290 Views
काठमाडौँ : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक सामग्रीमा निरन्तर र अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेको विरोधमा नेकपाको आह्वानमा भोलि अर्थात् मङ्गलबार नेपाल बन्द हुने भएको छ । नेकपाले बन्दको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सरकारले भने बन्दअघि आयोजना गरिएका आन्दोलनहरूमा दमन गरेर व्यापक गिरफ्तारी र आतङ्क मच्चाएको छ । बन्दको प्रचार र जनजागरणका लागि आयोजना गरिएको चक्काजाममा हस्तक्षेप गरी सरकारले कयौँ आन्दोलनकारीलाई गिरफ्तार गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक चरित्र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारी दमन र आतङ्कको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
नेकपाले मूल्यवृद्धिविरुद्ध नेपाल बन्दलगायत आन्दोलनमा होमिन र मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्न आह्वान पनि गरेको छ । सरकारले एक महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थमा ९ पटक र एलपी ग्याँसमा ४ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ । सरकारी निर्णयले आमनागरिक आक्रोशित बनेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राजमोलगायत संसद्वादी दलको नेतृत्व र समर्थनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको ‘काङ्माले’ सरकारले जनता उठ्नै नसक्ने गरी सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेकपाले जनाएको छ ।
सरकारले पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ (हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ) र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको छ । यो मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने तथा जनताको क्रयशक्ति घट्ने र मुद्रास्फीति झनै बढ्ने भएकाले मूल्यवृद्धिविरुद्ध आह्वान गरिएको नेपाल बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सफल पार्न नेकपाले आमजनसमुदायलाई आह्वान गरेको छ । सरकारले बढाएको मूल्य फिर्ता नलिएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्न पनि नेकपाले आह्वान गरेको छ ।नेकपाले ‘पेट्रोलियम र सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रतिवाद गरौँ ! यही कात्तिक ३० गतेको नेपाल बन्द भव्य रूपले सफल पाराैँ !!’ शीर्षकमा पर्चासमेत जारी गरेको छ ।
नेकपा केन्द्रीय समितिले जारी गरेको प्रचार सामग्रीमा भनिएको छ, ‘न्यायप्रेमी जनसमुदाय, जनताको दैनिक जीवन निर्वाहसँग जोडिएको आर्थिक मामिलाको मानक मानिने पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थलगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा सरकारले निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ र देश महँगीको आतङ्कले त्राहीमाम छ । एक महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थमा ९ पटक र एलपी ग्याँसमा ४ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ । पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ (हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ) र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ । यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने, जनताको क्रयशक्ति घट्ने र मुद्रास्फीति झनै बढ्नेछ । चामल, पिठो, दाल, खाने तेल, चिनीजस्ता खाद्य पदार्थमा कति मूल्यवृद्धि भयो भन्ने कुनै हिसाब छैन ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण तहका श्रमजीवी जनताको जीवन अथाह सङ्कटतिर धकेलिएको छ । आयल निगमले मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक गरेको दलिल पारदर्शी र तथ्यपरक छैन । लोड–अनलोडमा टाइम चिटिङ गरिएको छ । इन्डियन आयल निगमले एकतर्फी मूल्य निर्धारण गर्दछ । सीमामा भएको पेट्रोलियम पदार्थ तस्करीको भार जनतालाई थोपर्ने गरिन्छ जब कि सीमा नियमन गर्नु सरकारको दायित्व हो । डलरको मूल्य बढेको सरकारी दलिल झूट्टो हो । वास्तविकता त नेपाली मुद्राको मुद्रास्फीति भएको हो । यसलाई रोक्ने कुनै योजना छैन । भारतमा कतिमा किनिन्छ भन्ने पारदर्शी सूचना सार्वजनिक गरिएको छैन । वास्तविक घाटा कति हो र चुहावट कति हो ? पारदर्शी छैन । घाटाको वास्तविक कारण र समाधानको भरपर्दो छानबिन छैन । डिलरको कमिसन घटाउन र पारदर्शी मूल्य निर्धारण संरचना आवश्यक छ । मूल्य स्थिरीकरण शाखाको भूमिका देखिन्न । आयल निगम घाटामा जाने, कर्मचारीले लाभांश लिने मात्र होइन, विभिन्न शीर्षकमा सुविधा लिने र त्यसको व्ययभार जनतामाथि थोपरिएको छ । भ्रष्टाचार, चुहावट, अनियमितता, अनावश्यक कर कटौती गर्दा मात्र पनि धेरै हदसम्म मूल्य घटाउन सकिन्थ्यो । सरकार रमिते र संवेदनाहीन छ । त्यसैले यस्तो सरकारी ज्यादतीका विरुद्ध कात्तिक ३० गतेको नेपाल बन्दमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न र मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरिएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
Previous जितपछि अस्ट्रेलियाका खेलाडीको ‘अनौठो’ उत्सव, जुत्तामा हा’लेर बि’यर पि’ए (भिडियो सहित)
Next भोलि नेपाल बन्दको घोषणा,सवारीसाधन चल्नै नपाउने, पसलहरु के हुन्छ ?